Mampiavaka ny tanàna maoderina amin'ny taonjato faha-XNUMX | Fanavaozana maintso
Adriana | | Angovo azo havaozina, Tontolo_iainana
ny tanàna Izy ireo dia tranonkala izay iharan'ny fanovana arakaraka ny fizotra samihafa mitranga ao aminy, ny fomba fandaminana ny fiarahamonin'izy ireo ary rehefa mandeha ny fotoana.
¿Tahaka ny ahoana ny tanàna maoderina? Inona avy ireo fepetra takiana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa ary avy eo dia ho sariaka amin'ny tontolo iainana? Andao hojerentsika manaraka:
Mampiavaka ny tanàna maoderina amin'ny taonjato faha-XNUMX
Androany dia misy fironana iray hanavao ny tanàna, fa mba hahatratrarana izany tanjona izany dia misy lafiny lehibe sasany tsy maintsy raisina izay mampiavaka ny tanàna maoderina ny hafa mihemotra toy ny:
Avereno jerena ary raha ilaina dia ovao ny endrika fandaminana sy ny fampiasana ny faritry ny tanàna.
Manitatra serivisy ho an'ny daholobe toy ny rano fisotro, serivisy, herinaratra, internet, gazy, ankoatry ny hafa.
Mampiroborobo ny tranobe ekolojika tranobe na trano vaovao ary koa fanavaozana na famerenana amin'ny laoniny ireo efa antitra mba haharitra kokoa.
Matrix angovo tsy maintsy kasaina miorina amin'ny angovo azo havaozina ary isan-karazany izany. Ho fampiroboroboana ny fampiasana ny angovo madio samy amin'ny endrika anatiny fa amin'ny fampiasana indostrialy koa.
Ny fiarovana ny habaka maintso dia tokony hampiroboroboana ary hitombo ny fanitarana azy ireo raha toa ka zara raha misy.
Manambola sy manangana paikady ho an'ny fivezivezena maharitra any an-tanàna ary hampiroborobo sy manatsara ny fitateram-bahoaka, bisikileta ary fitaovana ara-tontolo iainana hafa.
Ataovy lohalaharana ny fampiasana ny teknolojia maitso sy mahomby.
Mampiroborobo ny fitsitsiana angovo sy ny fampiasana angovo mandanjalanja amin'ny faritra rehetra amin'ny tanàna.
Ampianaro ny momba ny tontolo iainana amin'ny fanabeazana ofisialy sy tsy ara-potoana amin'ny fomba hikarakarana ny tontolo iainana sy ny fomban'ny fanjifana tokony hovaina.
Mamolavola programa mitohy an'ny fanodinana amin'ny karazana fitaovana rehetra.
Manaova hetsika sy politika mampihena ny tsy fitoviana sy ny fahantrana.
Ireo no lafiny lehibe tokony harahina mba hahatratrarana a tanàna maoderina tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Betsaka ny tanàna mikely aina hahatratra azy, fa ny hafa kosa taraiky lavitra, izay mitaky fanapahan-kevitra politika lehibe sy faneriterena avy amin'ny olom-pirenena mba hahatratrarana azy.
Fanamby izany manova nukleus an-tanàn-dehibe ho tanàna maoderina manana fari-piainana mendrika ho an'ny olona miaro ny tontolo iainana sy mitahiry ny harenany ho an'ny taranaka ho avy.
Azonao ampiana teboka hafa ve ny lisitry ny toetra tokony hananan'ny tanàna maoderina?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Tanàna maoderina
Angovo arintany ary ny vokatr'izany ho loharano angovo